နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ - Myanmar Citizens Bank (MCB)
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ (Migrant workers) များ၊ မြန်မာပြည်သို့ ငွေလွှဲပို့ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Authorize Dealer License ကိုထုတ်ပေးခဲ့ရာ (၂၄.၈.၂၀၁၂) နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကို မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် IME (International Money Express) နှင့် နေရာပေါင်း (၆၉) နေရာမှ ကိုယ်စလှယ်ပေါင်း (၁၀၀) ဖြင့် IME မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား များဘဏ်သို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ RIA IME အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် ငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မူများ worldwide ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် လန်ဒန်အ‌ခြေစိုက် Money Gram ငွေလွှဲလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၇) နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း (၃၀၀,၀၀၀) ဖြင့် ငွေလွဲလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက် နေရပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် Money Gram ငွေလွှဲလုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငွေလွှဲလက်ခံခြင်း (Inbound Remittance) အပြင်၊ Banking Product အသစ်အဖြစ် နိုင်ငံခြားသို့ (Non Trade Remittance: Outbound Remittance) ကိုလည်း တစ်ဦးလျှင် အများဆုံး USD 3000 အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အခြားသောငွေလွှဲလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Transfer To, Merchantrade တို့ဖြင့်လည်း ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘာအနှံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Transfer To Mobile Financial Service, International F.C. Stone, Japan နိုင်ငံအ‌ခြေစိုက် Queen Bee Capital, Korea နိုင်ငံအ‌ခြေစိုက် Hanpass ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများနှင့်လည်း အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များရှိကာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း များကို ယခင်ကထက် ပိုမိုဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Money gram isainternational online money transfer service.
You can send money from Myanmar to foreign countries and receive money from foreign countries.
What is the maximum Limit of Outbound Remittance?